Videogiochi streaming with Cloud Gaming di Stadia, Geforce Now, Playstation Now 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Hatramin'ny vao haingana, mba hilalaovana ny lohatenin'ny lalao video tianao indrindra, dia tsy maintsy nividy console lalao ianao na nanangana PC filokana lafo vidy, ary mba haharaka ireo sary tsy mitsaha-mitombo, tsy maintsy manavao tsy tapaka ny solosaina izahay na mividy iray. console vaovao manodidina ny 3-4 taona. Saingy amin'ny fifandraisana Internet haingana dia nanomboka nitazona fomba vaovao filalaovana lalao video: ny lalao rahona.
Ny foto-kevitry ny filalaovana rahona dia tsy dia mitovy amin'ny lalao an-tserasera mahazatra hita amin'ny Internet, miaraka amin'ny fahasamihafana fa amin'ny alàlan'ireny sehatra rahona ireny dia azo atao ankehitriny. milalao na dia ny lalao video mandroso indrindra aza (toy ny CyberPunk 2077), izay mazàna dia mila PC misy karatra sary natokana na konsol toy ny Playstation 4 na 5. Na mampiasa PC mahazatra aza ary tsy mividy fitaovana manokana, noho izany, izy io dia azo lalaovina tsy misy sakana ary misy kalitao avo lenta, satria ny loharanom-pahalalana ilaina amin'ny fampandehanana ny lalao dia omen'ny mpizara lavitra mahery, izay ampifandraisantsika amin'ny alàlan'ny Internet hahazoana ny onjam-peo / horonan-tsary ary handefasana ny fampidirana baiko.
Amin'ity toro-lalana ity dia hasehoko anao ny fomba filalaovana amin'ny Internet tsy misy console na PC gaming manararaotra ny serivisy lalao rahona misy any Italia ary mora idirana na dia misy fifandraisana Internet tsy mandeha manokana aza (mazava ho azy, tsy maintsy hisoroka hatrany ny fifandraisana miadana na ny fifandraisana ADSL isika, ankehitriny tsy mety tanteraka amin'ny ankamaroan'ny serivisy atolotra ao ny harato).
VAKIO IZAO: Ahoana ny fomba filalaovana lalao PC amin'ny fahitalavitra
Ahoana no filalaovana lalao rahona
Araka ny voalaza tao amin'ny fampidirana dia tsy afaka milalao rahona fotsiny isika raha manana fifandraisana Internet tsy mitovy - amin'ny ankamaroan'ny serivisy dia io ihany no takiana (ankoatry ny GeForce Now) toy ny ny zava-mitranga eo amin'ny efijery misy antsika dia stream stream mahazaka PC misy na dia 7 taona na mihoatra aza eny an-tsorony. Rehefa avy nahita ny fepetra takiana izahay, dia hasehonay anao ny serivisy azonao ampiasaina any Italia amin'ny filalaovana rahona sy ny kojakoja torohevitra tokony hampiasainao mba hahatonga ny traikefa lalao ho tena feno.
Fepetra takiana amin'ny rafitra sy tambajotra
Ho an'ny filalaovana rahona, mila laharana an-tariby amin'ny Internet misy fisoratana anarana fisaka (noho izany tsy misy fisoratana anarana aloa na fifandraisana tsy misy tariby) afaka mahafeno ireto fepetra manaraka ireto:
Hafainganana misintona: farafaharatsiny 15 megabits isan-tsegondra (15 Mbps)
Hafainganana mampakatra: farafaharatsiny 2 megabits isan-tsegondra (2 Mbps)
nisioka: latsaky ny 100 ms
Mba hahazoana ny valiny tsara indrindra dia sorohintsika ny fampiasana ny fifandraisana Wi-Fi eo anelanelan'ny PC sy ny modem ary aleontsika ny fifandraisana tariby Ethernet: raha lavitra be ny modem amin'ny PC tiantsika hilalaovana dia afaka manao izany isikana miloka amin'ny Fifandraisana herinaratra na amin'ny mpamerina Wi-Fi 5 GHz hanatsarana ny fitoniana sy ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisana. Mba hanandramana ny fifandraisanao amin'ny Internet any an-trano ka hahitanao raha mety amin'ny filalaovana rahona izy, dia mamporisika anao izahay hitantana ny fitsapana haingana ao amin'ny lahatsoratray "Fitsapana ADSL sy Fiber: Ahoana no refesina ny hafainganan'ny Internet?", izay ampy hanodinana ny pejy ary tsindrio ny bokotra fanandramana Start hahalala avy hatrany raha mahafeno ireo fepetra takiana etsy ambony izahay.
Lalao rahona hita any Italia
Raha mifanandrify amin'ny Internet ny fifandraisana Internet dia afaka misafidy serivisy marobe isika hanomboka hilalao amin'ny Internet avy hatrany tsy misy console sy PC tsy misy lalao.
Ny serivisy voalohany atolotray anao andramana dia Google Stadia, azo idirana avy amin'ny tranokala ofisialy ary mihazakazaka miaraka amin'ny tranokala Google Chrome (hapetraka ao amin'ny solosainay).
Amin'ity serivisy ity dia ampy ny manana kaonty Google ary misoratra anarana amin'ny famandrihana € 9,99 isam-bolana mba hilalao lalao maro avy hatrany, eny fa na dia ny tena vao haingana aza, miaraka amin'ny kalitaon'ny fifindrana sy ny valin'ny baiko avo lenta avo indrindra ( misaotra an'ireo servisy natokana ho an'i Google).
Raha te hitondra ny Google Stadia ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny sy milalao lalao amin'ny fahitalavitra isika, dia afaka mieritreritra ny hividy ny bundle Stadia Premiere Edition, izay manolotra Controller wifi stadia Is a Chromecast Ultra milalao amin'ny rahona amin'ny fahitalavitra rehetra.
NAOTY: Raha tianao andramo maimaim-poana i Stadia ary hamarino fa ny fifandraisanao amin'ny Internet dia haingana dia haingana handefasana lalao video, azonao atao izany nefa tsy manome carte de crédit. Mila misoratra anarana amin'ny kaonty fanandramana fotsiny ianao ary alohan'ny hamaranana ny fisoratana anarana dia ampiasao ny safidy hizaha toetra ny serivisy mandritra ny 30 minitra. Manaraka, angataho ny iray amin'ireo lalao maimaim-poana nomen'ny Stadia Pro ary manomboka milalao hahitanao raha mety amin'ny PC-nao izany.
Serivisy iray hafa izay azontsika ampiasaina amin'ny lalao rahona dia GeForce IZAO, tantanan'ny NVIDIA ary misy amin'ny tranokala ofisialy.
Amin'ny fisoratana anarana amin'ny serivisy sy fampidinana ny fampiharana manokana amin'ny fitaovantsika, afaka milalao maimaim-poana tsy misy fetra mandritra ny adiny iray isan'andro isika, fa amin'ny fidirana mihombo (tsy maintsy mahita toerana malalaka amin'ny mpizara) isika; Milalao ny lalao rehetra eo noho eo, tsy misy fiandrasana ary manana kalitao avo lenta (miaraka amin'ny fampandehanana ny NVIDIA Ray Tracing), misoratra anarana fotsiny ny famandrihana ho an'ny € 27,45, mba haloa isaky ny 6 volana. Mba hahafahana milalao dia misy ihany koa ny takiana farafahakeliny ho an'ny PC ampiasaina, satria ny ampahany dia mampiasa ampahany kely indrindra amin'ny loharanom-pahalalana: ny milalao tsara dia ampy ny manana PC misy 4GB RAM sy carte de vide izay manohana ny DirectX 11, toy ny hita eo amin'ny pejy takiana ofisialy. Mba hilalao tsy misy ahiahy eo no ho eo dia mety hoheverintsika ny fampiasana ilay NVIDIA SHIELD TV, dongle HDMI vonona hampiasaina amin'ny lalao rahona ary misy amin'ny Amazon latsaky ny 200 €.
Serivisy tsara hafa azontsika andramana ho an'ny gaming cloud dia PlayStation izao, nomen'ny Sony ary azo alaina avy amin'ny tranonkala ofisialy.
Amin'ity serivisy ity dia afaka milalao ny lohateny misy amin'ny PS4 sy PS5 koa izahay amin'ny PC, ny hany tokony ataontsika dia ny misintona ny fampiharana manokana ho an'ny Windows PC, miditra amin'ny kaonty Sony ary mandoa ny famandrihana isam-bolana (€ 9,99 isaky volana). Raha te-hilalao amin'ny rahona ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny eo anoloan'ny fahitalavitra isika dia afaka manararaotra tsara ny PS Now amin'ny PS4 Pro na PS5, hialana amin'ny fividianana lalao sy filalaovana an-tserasera amin'ny kalitao avo indrindra.
VAKIO IZAO: JoyPads tsara indrindra ho an'ny PC
Amin'ny alàlan'ny fisafidianana iray amin'ireo serivisy lalao rahona aseho etsy ambony, dia afaka milalao an-tserasera tsy misy console izahay ary tsy mila manangana PC filokana (tena lafo), mandoa vola aloa isam-bolana, na mividy lohateny ho an'ny fanangonana manokana. (ao amin'ny Google Stadia). Ny serivisy sasany dia maimaim-poana tanteraka ihany koa, saingy manana fotoana sy fetran'ny bandwidth, noho izany dia tsy afaka atao foana ny milalao araka ny fahita amin'ny serivisy aloa. Raha mamela azy ny fifandraisana Internet, andao andramo ny lalao rahona, satria efa matotra izao ny mpizara sy ny fifandraisana ampiasaina ahafahana mamindra ny traikefa amin'ny lalao an-tserasera rehetra, hisoroka ny olana rehetra mifandraika amin'ireo singa taloha ( karatra horonantsary tsy mandeha na PC tsy mahomby amin'ny fampisehoana).
Raha liana amin'ny lalao video isika dia aza adino ny lisitr'ireo ny lalao 60 maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny PC.